नेपाली बजारमा मारुती सुजुकीको एक्सएल-६ को मूल्य कति पर्छ ? यस्ता छन् विशेषता – Khabar Silo
मारुती सुजुकी एमपीभी एक्सएल ६ का दुई भेरियन्टमा नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । यसलाई मारुती सुजुकीको आधिकारिक वितरक सिजी मोटो कर्पले नाडा अटो शो २०१९ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।
फरक स्टाइल, आकर्षक फिचर तथा पावरफुल इन्जिन समेटिएको एक्सएल ६ नेपालमा अल्फा र जेटा गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छन् ।
एक्सएल–६ मा उपलब्ध के१५बी स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इन्जिनले ६ हजार आरपीएममा १०४.७ पीएस पावरका साथै ४४ सय आरपीएममा १३८ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । यसको इन्जिनमा ६ स्पीड गियरबक्स जडान गरिएको छ ।
यो एमपीभीको लम्बाई ४४४५ एमएम, चौडाई १७७५ एमएम, उचाई १७०० एमएम रहेको छ । यसमा २७ सय एमएमको ह्वीलवेश छ ।
एआरएआईका अनुसार यसमा दिइएको १४६२ सीसीको इन्जिनले प्रतिलिटर १९.०१ किलोमिटर माइलेज प्रदान गर्ने छ ।
अल्फामा लेदर सिट, अलोय ह्वील, आउट साइड रियर भ्यु मिरर, सेन्ट्रल लकिंग, इन्जिन इमोबिलाइजर, फ्रन्ट फगल्याम्प, ब्रेक असिस्ट, एबीएस, इबीडी लगायतका विशेषता दिइएको छ । कम्पनीले अल्फा मोडलको मूल्य ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जेटा भेरियन्टमा सिटबेल्ट, एबीएससँगै इबीडी, रियर पार्किङ सेन्सर, स्पीड वार्निङ सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल फ्रन्ट सिटवेल्ट, आइएसओ फिक्स चाइल्ड सिट, सिट बेल्ट रिमाइन्डर, रियर पार्किङ क्यामरा लगायतका विशेषता दिइएको छ । यसको नेपाली बजारमा ४६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।
कम्पनीले दुबै मोडलमा ७ इन्च इन्फोटेनमेन्ट सिस्टसँगै एप्पल कार प्ले र एन्ड्रोइड अटोको बिशेषता दिइएको छ भने एलइडी हेडल्याम्प र एलइडी डीआरएलएस, क्रुज कन्ट्रोको फिचर समेटिएको छ ।
के तपाई सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ नेपालि बजारमा आजको मुल्य!
हप्ताको पहिलो दिन आइतबार घटेको सुनको भाउमा सोमबार पनि सामान्य गिरावट आएको थियो । शुक्रबारको तुलनामा आइतबार प्रति तोला ५ सय रुपैयाँले घटेको सुन सोमबार एक सय रुपैयाँले घटेको थियो हो। त्यस्तै आज भने सुनको मुल्य स्थिर रहेको छ। नेपाली बजारमा आज छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले […]
प्रतितोलामा तीन सय रुपैयाँ घट्यो सुन, यस्तो छ आजको बजार मूल्य
काठमाडौं – साताको अन्तिम दिन आज नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज शुक्रबार सुन तोलामा तीन सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९६ हजार ५ सय कायम भएकाे हाे । बिहीवार सुन प्रतितोला ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियाे । यस्तै तेजावी सुनकाे मूल्य ९६ हजारमा […]